अर्थ Archives - nepnews
Category : अर्थ
लकडाउन खुलेपछि ३५ अर्व राजस्व उठ्यो
असारदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएपछि राजस्व उठ्ने क्रम बढेको छ । राजस्व विभागका अनुसा अहिलेसम्म सरकारले ३५ अर्वभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । विभागले दैनिक साढे १ अर्ब रुपैयाँको दरले राजस्व संकलन भइरहेको जनाएको छ...
रसुवागढी नाका आजदेखि संचालनमा
नेपाल–चीनको प्रमुख ब्यापारिक नाका रसुवागढी आजदेखि संचालनमा आएको छ । कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो ६ महिनादेखि यो नाका बन्द भएको थियो । नेपाल–चीनबीचको व्यापार संचालन गर्ने सुरक्षा मापदण्डमा समझदारी बनेसँगै नाका खुलेको हो । नेपाल...
विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि विश्व बैंकले १० करोड ऋण दिने
विश्व बैंकले नेपालको विद्युत क्षेत्र सुधारका लागि १० करोड डलर अर्थात करिब १२ अर्ब १० करोड ऋण दिने भएको छ । बैंकले आज विज्ञप्ती निकालेर कार्यकारी निर्देशक बोर्डको बैठकले नेपाललाई दिने ऋण सहायता स्वीकृत गरेको...
लकडाउनका बेला ब्यावसायीलाई कर बुझाउन ब्यावसायीलाई सरकारको ताकेता
Nepnews June 2, 2020
लकडाउनका कारण २ महिना थपिएको म्याद सकिनै लाग्दा सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कर बुझाउन ताकेता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना निकालेर जेठ २५ भित्रै कर बुझाउन ताकेता गरेको हो । विभागले २०७६ को...
कृषि मल कोलकातामै रोकियो, यो सिजन पनि कृषकलाई मर्का
Nepnews June 1, 2020
धान खेतीको मुख्य सिजनमा यसपाली पनि मल अभाव हुने देखिएको छ । साल्ट्र ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले खरीद गरेको रसायनिक मल कोरोनाका कारण भारतको कोलकातामै अड्किएको छ । जसका कारण विगतमा जस्तै यो वर्ष...
कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा वर्षैपिच्छे बजेट !
Nepnews May 31, 2020 May 31, 2020
बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम नियालेर हेर्ने हो भने केहि यस्ता कार्यक्रम देखिन्छ जसका लागि भन्दै सरकारले वर्षेनी बजेट छुट्याउने गर्छ । तर त्यसरी छुट्याइएका कार्यक्रम भने खास्सै कार्यान्वयन हुँदैनन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट...
पेट्रोलियम पद्धार्थको भन्सार दरमा बृद्धि, सुन पनि महँगिने
Nepnews May 29, 2020
सरकारले बजेटमार्फत भन्सार दर बढाइदिएसँगै सुन प्रति तोला २ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँले महँगिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत सुनको भन्सार दर प्रति १० ग्राम २ हजार रुपैयाँले बढाएसँगै सुन...
भारतसँगको निर्भरता बढ्दो, असमान ब्यापार सम्झौता नेपालका लागि घातक
नेपाल र भारत रितिरिवाज, चाल चलन, धर्म र संस्कृति मिल्ने छिमेकी मात्र हैनन्, व्यापारिक साझेदार पनि हुन् । तर भारतसँग नेपालको ब्यापार भने समान छैन । सीमानामा थिचिमिचो गरिरहने भारतले व्यापारमा पनि हामीलाई जुकाले जसरी...
सरकारको निति तथा कार्यक्रमः स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान पहिलो प्राथमिकता
सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान आप्नो आगामी कार्यदिशा हुने जनाएको छ । राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका आगामी कामका प्राथमिक क्षेत्रबारे जानकारी दिनुभएको हो । कोरोनाले...
विद्युत नपुगेको स्थानमा सौर्य मिनी ग्रेड बनाइने
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका स्थानीय तहमा सौर्य मिनी ग्रिड बनाउने भएको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षमा माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको...